Loharano 5 ho an’ny Olontsotra Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2018 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, Español, বাংলা, فارسی, English
Vao navoakan'ny Internews vao haingana ity PDF afaka sintonina malalaka ity (Creative Commons), izay mitodika amin'ireo mpampianatra ary maodely tsara koa ho an'ireo izay mikasa ny hianatra fotsiny ny fomba hahalasàna ho mpanao gazety hieren-doza kokoa. Ifantohan'io fitaovana io ny: fanombanana ny loza mety hiseho, fiarovana amin'ny rindrambaiko mpisompatra sy fiarovana fototra, fiarovana ny angon-drakitra, fikarohana azo antoka, fiarovana ny imailaka, ary fiarovana ny finday.
Ity boky azo sintonina maimaimpoana avy amin'ny ReliefWeb sy ny Internews ity dia fitarihana sy torolàlana ho an'ireo mpiasa, mpitatitra, ary mpampianatra amin'ny sehatry ny maha-olona ho fanampiana azy ireo hampitombo ny fifandanjàna anatin'ny fanaovana tatitra. Ahitàna fanazarana ho an'ny fampianarana maro izany sady manana fizaràna manazava ireo valinteny matetika mitranga ao anatinà krizy amin'ny lafiny maha-olona, ary miresaka momba ny fiarovana sy ny fandriampahalemana.
Tetikasa andalam-pivoarana mila jerena: Manampy amin'ny fampiroboroboana ny fanamarinana ho an'ny famokaram-baovao tarihin'olontsotra ao Afovoany Atsinanana ny Meedan, izay manamboatra ‘‘fitaovana fanoratana bilaogy mivantana tarihin'olontsotra ankehitriny, tohananà andrana famoahana ny Checkdesh, ho an'ny gazety tsy miankina mpitarika ao Egypta, Al-Masry Al-Youm” – ary hitarina tsy ho ela any amin'ny firenena sy toerana fanontàna hafa.
Avy amin'ny Tactical Tech, navoaka tamin'ny 2013 izy io fa mendrika ny haverina topazana maso, mamelatra ny fomba fanaovana hetsipanentanana tsotra amin'ny fomba niomerika sy malalaka. Anatin'izany ireo Fototra (mpamaky, hafatra, tambajotra…), Paikady (mitantara, mampihetsika, misintona ny saina, mifantoka amin'ny finday, printy, haino amanjery sôsialy, sns), Fitaovana, ary Ohatra. Mifantoka amin'ny zon'ny vehivavy daholo ny zava-drehetra.
(Mifandray amin'izany koa: Lahatsoratra vao navoakan'ny Witness mifantoka amin'ny fitaterana momba ny herisetra ara-nofo ary ny torolàlana amin'ny fomba fanatanterahana izany)
32 minitra izayAzia Afovoany sy Kaokazy